Noho ny Tahotra sa fitadiavamPitahiana?
2007-10-05 @ 15:54 in Andavanandro
Hafa indray ity lasa malaza be eto amin’ny tanàna ity nefa tahaka ny efa mahazatra ihany fa niova lasy ny taranja. Efa tratran’izy ity aho fony mbola taratasy no natao dia avy ilay hoe adikao in-21 ity dia hahazo fitahiana ianao fa raha tsy izany kosa dia mety hisy loza hitranga aminao tampoka. Nisy an-dranona tatsy ananona tsy niraharaha fa tratran’ny lozam-pifamoivoizana tampoka. Efa ho roapolo taona lasa izay, izaho moa tsy niraharaha fa tsy nisy voina tampoka nahazo ahy aloha hatramin’izao fa izao mahazo surf maimai-poana mila ho isan’andro izao.
Ankehitriny kosa lasa any amin’ny finday indray ilay zavatra ka amin’ny teny frantsay. Toy izao ny votoatin’ny soratra satria ny sms no hanaovany azy: “ Tia anao Jesoa ary mahita ny ranomasonao isan’andro. Adikao sy alefaso amin’ny olona sivy ity dia hahare vaovao tsara ianao rahampitso”. Dia izay, izany hoe ny tiany lazaina dia mandania vola eo amin’ny arivo ariary eo ho eo ianao dia hahazo fitahiana…na hahazo tombom-barotra mitombo hatrany ny orinasa celtel, orange ary telma gsm. Dia be tokoa anie ny mandefa azy ry mpamaky hajaina e! izany hoe ny sms moa efa voafetra ho eo amin’ny 120 ihany ny isan-tsoratra azo alefa ka voatery nohafohezina; fa raha tsy izany dia avy ilay hoe hahazo loza kosa ianao raha tsy mandefa.
Ny tena loza, hoy ny mpanolotra amin’ny radio iray dia alina amin’ny 11 sy sasany na sasakalina any mihitsy no mandefa ny sasany fa izay angamba vao nahita handefasana. Efa niezaka ny nanazava ihany izy hoe tsenam-barotry ny sasany fotsiny anie ny fandefasanao io sms io fa e-he…ndrao dia misy fitahiana tampoka nefa dia fitahina mazava be izao!